China Steel Platform umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
1. I-Free Stand Mezzanine iqulethe isithuba esithe tye, i-beam engundoqo, i-beam yesibini, i-flooring deck, i-staircase, i-handrail, i-skirtboard, umnyango, kunye nezinye izixhobo ezikhethiweyo ezifana ne-chute, i-lift kunye njl.
2. I-Free Stand Mezzanine ihlanganiswe ngokulula.Inokwakhelwa ukugcinwa kwempahla, imveliso, okanye iofisi.Inzuzo ephambili kukudala indawo entsha ngokukhawuleza nangempumelelo, kwaye iindleko ziphantsi kakhulu kunokwakhiwa olutsha.
Uhlobo lweRacking: Ukuma kwaMahala Mezzanine
Izinto: Q235/Q355 Intsimbi Isatifikethi CE, ISO
Ubungakanani: eyenziwe ngokwezifiso Iyalayisha: 300-1000kg ngem2
I-pitch No isandi Indawo yemvelaphi Nanjing, China
Isicelo: isetyenziswa kakhulu kwindawo yokugcina iimpahla, iimpahla ezincinci, ukuchola ngesandla kunye nogcino oluxinana kakhulu, njengaiinxalenye zemoto, i-E-commerce kunye namanye amashishini.
① uyilo olubhetyebhetye
I-Multi-tier mezzanine inokwenziwa ngokwezifiso ukulungelelanisa iimeko zangoku zokugcina, ezifana nezixhobo ezikhoyo, iikholamu zokwakha, isango lokugcina, kunye nezinye izithintelo.
② Ubude obuninzi
Indawo yokuma yasimahla iMezzanine inokwakhiwa njengemigangatho emibini nangaphezulu, isenza umthamo wogcino kabini, kathathu okanye ngaphezulu, ngokusebenzisa indawo yokugcina iimpahla ngokwaneleyo, ngaphandle kwemfuneko yomgangatho owahlukileyo we-mezzanine.
Eyilwe njengemodyuli ngokupheleleyo, i-Free Stand Mezzanine inokufakwa ngokukhawuleza ngaphandle kwe-welding kwisiza, kwaye iguqulelwe ngokulula okanye ishukunyiswe ukuba kukho utshintsho lwemeko yendawo yokugcina okanye indawo yokugcina.
Ukukhethwa kweentlobo zemigangatho ziyafumaneka ukuze zihambelane neemfuno ezahlukeneyo.
④ Ukuziqhelanisa kakuhle
I-Free Stand Mezzanine iyakwazi ukuhambelana kakuhle nezinye iintlobo zokukhwela, oko kuthetha ukuba kuvunyelwe ukubeka enye i-racking kumgangatho we-mezzanine, njenge-shelving ye-light duty, i-medium duty shelving, okanye i-multitier mezzanine, ukudala iindlela zokugcina ezininzi.
Xa kuthelekiswa nokufudukela kwindawo entsha, okanye ukwandisa isakhiwo esikhoyo, iMezzanine yasimahla ixhasa ukwakha imigangatho kunye neshelufu njengenye, eyonga kakhulu iindleko, ixesha kunye nabasebenzi.
Ngaphambili: I-Boltless Shelving
Okulandelayo: Longspan Shelving
Qhuba kwi Racking, Umhambisi, IShuttle yomntwana, I-Four Way Shuttle, Asrs Ugcino, ICarton Live,